10 / 06 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Juun 10, 2018
3. Madaarka iyo Channel Istanbul Hit Yeniköy
Gegada diyaaradaha ee 2, halkaas oo in kabadan hal milyan oo geed loo jaray dhisme, wuxuu uga tagay Yeniköy neefsashada. Doğa Waxaan khiyaanaynay magaaladan welina waxaan ku khiyaamaynay ından, afka madaxweyne Tayyip Erdoğan laftiisa. [More ...]
Jawaab ka bixinta qoraalka ku yaala Qalinka Gargaarka Nostalgic ee Daarid
Dadka aan la aqoonsan ee Düzce ama qoraallada foosha xun ee ay ku qoreen dadka derbiga garaashka taraamka ayaa jawaab ka bixinaya. Wasakhda gidaarka oo leh rinji buufin 'Muwaadiniin aad u xun' ayaa dhahay, labadaba waxay dhaawaceyaan hantida dawladda [More ...]
Wasiir Arslan: ar Waxaan maalgelinay miisaaniyad bilyan oo doolar oo maalgalin ah mashaariicda gaadiidka
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa yiri, “Sannadkii ugu dambeeyay ee 15, waxaan ku maalgelinay 474 bilyan ginni mashaariicda gaadiidka. Xaddiga sanadlaha ee kaydinta ah ee aan ka samayno mashaariicda gaadiidka waa 11 bilyan oo doolar. ” Gaadiidka, Badda [More ...]
Sefik Can Bridge Interchange waxay bilaabeysaa adeeg
Qeybta hoose ee Isdhaafsiga Şefik Can Bridge, oo ay dhammeystireen Dawladda Hoose ee Magaalada Konya, ayaa loo furay adeegga. Uğur İbrahim Altay, Duqa Magaalada Caasimadda, ayaa sheegay inay u soo bandhigeen marinka sharciga adeegga muwaadinka muddo xileed sida 82 maalmood, [More ...]
Dibad-bixinta Qoritaanka Jadwalka Taraafikada ee Boosaaso
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu isugu soo bixi doonaa Atatürk Stadium Square waxaana barnaamijka Iftar ee ay soo qabanqaabisay Dowlada Hoose ee Magaaladda Metro uu xirey adeegga taraamyada ee Bursa in muddo ah. Dowlada hoose ee mowduuca maadada [More ...]
Maalgashiga laga soo bilaabo BB-ga ilaa Izmir! Ily Hay'ada Narsandere Metro ayaa la bilaabay
Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir, 1 bilyan ginni F. Altay-Narlıdere metro line ayaa asaasay xaflada. 176 milyan oo yuuro oo loogu talagalay Narlıdere Metro ayaa saxeexday heshiiska, Buca Metro ee amaahda 500 milyan euro [More ...]
Maanta taariikhda: 10 June 1929 Samsun Coast Railways
Maanta taariikhda 10 Juun 1929 Xeerka No. 1524 ee suuqa saamiyada Samsun Coast Railways ayaa la soo saaray.